Ndị a bụ Macs nke ga-akwado macOS Monterey | Esi m mac
Ndị a bụ Macs nke ga-akwado macOS Monterey
Ezigbo macOS 12 Monterey ka egosiri n'ehihie ụnyaahụ na WWDC 2021. Anọ m na-atụ anya ụdị ọhụụ a ma ya Beta dị ugbu a maka nbudata na ịmalite iri ozi ole na ole ya na karịa karịa na ụdị mbụ nke beta. Ọ bụ ezie na anyị nwere ike ikwu na ọ bụ "n'ihu" na-asọpụrụ macOS ugbu a Big Sur. Ihe kachasị ọhụrụ bụ ihe a na-akpọ ụzọ mkpirisi, nke ga-eme ka ịrụ ọrụ Mac dị mma. Ọ bụ ya mere anyị ji hapụ gị n'okpuru a depụta ya na Macs dakọtara ya na ụdị sọftụwia ọhụrụ a.
Apple ejiri WWDC 21 mechie, na-ewebata macOS Monterey n'akụkụ mmelite maka iPhone, iPad na Apple Watch. Ọ bụ ezie na macOS Monterey nwere ike ọ gaghị abụ nke kachasị ukwuu na ọkwa akpọsara na WWDC taa, atụmatụ mmelite ahụ a redesigned Safari ahụmahụ site na imepụta taabụ ọhụrụ nke na-enye ndị ọrụ ohere ịhụ ọtụtụ peeji ka ha na-agagharị. Ogwe taabụ ọhụrụ na-ewe agba nke ibe weebụ ma jikọta taabụ, ogwe aka na ebe ọchụchọ na otu kọmpat.
Nke kachasị mma bụ ụzọ mkpirisi dị ka ha dịworị na iOS na iPadOS na ọ bụ na Monterey a na-achọ ịbụ sistemụ arụmọrụ maka Macs nke na-eme ka njikọta ya na ndị ogbo ha nke ngwaọrụ ndị a na-ebugharị ebugharị yiri ka ọ bụ ihe yiri ya. Ihe nnọchianya nke Apple, mmekọrịta ahụ n'etiti ngwaọrụ dị iche iche na-eju anya mgbe niile. Ọ bụ ya mere na ọ bụ na-akpali mara na Mac bụ ndị na anyị nwere ike imelite.
Ndị a bụ kọmputa Mac dakọtara na ụdị ọhụrụ ahụ:
iMac - Mbubreyo 2015 na mgbe e mesịrị
Mac Pro - Mbubreyo 2013 na mgbe e mesịrị
iMac Pro - 2017 na mgbe e mesịrị
Mac mini- Mbubreyo 2014 na mgbe e mesịrị
MacBook Ikuku - Ná mmalite 2015 na mgbe e mesịrị
MacBook- Ná mmalite 2016 na mgbe e mesịrị
MacBook Pro - Ná mmalite 2015 na mgbe e mesịrị
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac OS X » Ndị a bụ Macs nke ga-akwado macOS Monterey
Apple ga-ebido HomePod mini na mba ndị ọzọ n'afọ a
Ngwa ngwa nke AirPods ga-enwekwa akụkọ